अपडेट | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 2
काठमाण्डौ मंसिर २४ ■ अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माले विवाहको दुई वर्षमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी छिन् । दुई वर्ष अगाडि काठमाण्डौको होटेल हायातमा भव्य रुपमा बेलायतमा बस्दै आएका..
भारतीय टेलिभिजनमा नेपाली मोडल सबिता
काठमाण्डौ मंसिर २४ ■ पछिल्लो समय नेपाली मोडलहरुले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आस्था पोखरेल, अन्जली लामा, वर्षा थापा, अदिती बुढाथोकी यसका ज..
सलमानको साईकल मोह
एजेन्सी मंसिर २२ ■ फिटनेसमा विशेष ध्यान दिने सलमान खान शारीरिक व्यायाममा खास ध्यान दिन्छन् । उनी कुनै पनि ठाउँमा आराम भन्दा काम गरिरहन र शरीरलाई सक्रिय राख्न मन पराउँछन..
बाँधियो प्रमोद र निताको जोडी
काठमाण्डौ मंसिर २२ ■ अभिनेत्री निता ढुङगाना र प्रमोद भारद्वाजको जोडी बाँधिएको छ । हाल छायाकंन भईरहेको सिनेमा ‘रियाल रिंगेट’मा यी दुईले पर्दा बाँडेका हुन् । यसै सिनेमा म..
भोट कसले हाले ? कसले हालेनन् ?
काठमाण्डौ मंसिर २२ ■ मंसिर २१ गते प्रतिनिध सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ । यस चुनावमा कलाकारहरुले पनि आफूले चाहेको पार्टी र नेतालाई मतदान गरेका छ..
‘झ्यानाकुटी’ले चौथो सातामा कति शो पायो ?
काठमाण्डौ मंसिर २२ ■ अभिनेत्री निशा अधिकारीलाई सिनेमा निर्माण फापेको छ । उनको पहिलो निर्माण ‘झ्यानाकुटी’ले चौथो सातामा प्रवेश गरेको छ । पहिले निर्माणले नै यति लामो समयस..
बलिवुडका यी सिनेमा जसले विदेशमा धेरै कमाए
एजेन्सी मंसिर २२ ■ बलिवुड सिनेमाको बजार भारत बाहिर पनि फैलिएको छ । तर पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा भने बलिवुड सिनेमाको बजार खस्किँदै गएको छ । नेपाली सिनेमाले नै राम्रो कारोबार गर्न थालेपछि बलिवुड सिनेमाको कारोबारमा गिरावट आएको देख्न सकिन्छ । यस अघि भने नेपाली सिनेमाको बजारमा भारतीय सिनेमाले रजाईँ गर्थे । नेपाल लगायत अन्य [&helli..
प्रियंका, स्वस्तीमा, विपिन र पलले के भने रेडियो अडियोलाई ?
काठमाण्डौ मंसिर २१ ■ मंसिर २१ अर्थात आजको दिन रेडियो अडियोले आफनो नियमित प्रसारणको १० बर्ष पूरा गरेको छ । २०६४ साल भदौ १२ गते गाईजात्राको दिनदेखि परिक्षण प्रसारण थालेको रेडियो अडियोले आफ्नो औपचारिक नियमित प्रसारण मंसिर २१ अर्थात आजैको दिन देखि सुरु गरेको थियो । आजको दिनमा हाँस्य कलाकारले मात्रै नभयर सिने कलाकार र […]
विदेशबाट फर्केपछि पहिलो पटक रेडियो अडियोले अन्र्तवार्ता लिएको भन्दै खुशी भए राजाराम
काठमाण्डौ मंसिर २१ ■ मंसिर २१ अर्थात आजको दिन रेडियो अडियोले आफनो नियमित प्रसारणको १० बर्ष पूरा गरेको छ । २०६४ साल भदौ १२ गते गाईजात्राको दिनदेखि परिक्षण प्रसारण थालेको रेडियो अडियोले आफ्नो औपचारिक नियमित प्रसारण मंसिर २१ अर्थात आजैको दिन देखि सुरु गरेको थियो । रेडियो अडियोको ११ औँ वर्षगाँठमा निर्मल शर्मा, शिवहरि बैरागी, [&helli..
रेडियो अडियोलाई सिनेकर्मीको शुभकामना
काठमाण्डौ मंसिर २१ ■ मंसिर २१ अर्थात आजको दिन रेडियो अडियोले आफनो नियमित प्रसारणको १० बर्ष पूरा गरेको छ । २०६४ साल भदौ १२ गते गाईजात्राको दिनदेखि परिक्षण प्रसारण थालेको रेडियो अडियोले आफ्नो औपचारिक नियमित प्रसारण मंसिर २१ अर्थात आजैको दिन देखि सुरु गरेको थियो । रेडियो अडियोको ११ औँ वर्षगाँठमा अभिनेता आसिफ साह, निर्माता [&helli..
काठमाण्डौ मंसिर २१ ■ मंसिर २१ अर्थात आजको दिन रेडियो अडियोले आफनो नियमित प्रसारणको १० बर्ष पूरा गरेको छ । २०६४ साल भदौ १२ गते गाईजात्राको दिनदेखि परिक्षण प्रसारण थालेको रेडियो अडियोले आफ्नो औपचारिक नियमित प्रसारण मंसिर २१ अर्थात आजैको दिन देखि सुरु गरेको थियो । रेडियो अडियोको ११ औँ वर्षगाँठमा हाँस्यकलाकार तथा रेडियो अडियोका [&he..
काठमाण्डौ मंसिर २१ ■ मंसिर २१ अर्थात आजको दिन रेडियो अडियोले आफनो नियमित प्रसारणको १० बर्ष पूरा गरेको छ । २०६४ साल भदौ १२ गते गाईजात्राको दिनदेखि परिक्षण प्रसारण थालेको रेडियो अडियोले आफ्नो औपचारिक नियमित प्रसारण मंसिर २१ अर्थात आजैको दिन देखि सुरु गरेको थियो । हरेक गाईजात्राको दिन हाँस्यब्यङग्य क्षेत्रका सबै कलाकारहरुको उपस्थित..
काठमाण्डौ मंसिर २१ ■ मंसिर २१ अर्थात आजको दिन रेडियो अडियोले आफनो नियमित प्रसारणको १० बर्ष पूरा गरेको छ । २०६४ साल भदौ १२ गते गाईजात्राको दिनदेखि परिक्षण प्रसारण थालेको रेडियो अडियोले आफ्नो औपचारिक नियमित प्रसारण मंसिर २१ अर्थात आजैको दिन देखि सुरु गरेको थियो । रेडियो अडियोको ११ औँ वर्षगाँठमा कलाकार तथा रेडियो अडियोका […]